12 Tricks Kutarisira Multiple Cloud Services | ITS
Kutarisira Multiple Cloud Services - DevOps
Hapana kana mutengesi wegore rimwe chete ane mhinduro yakanaka kune imwe yako yebhizimisi mamiriro ezvinhu. Nzira yakanakisisa yekuwedzera zvigaro zvegore kutonga kune bhizinesi rako nderokutarisira mashomanana emakore vatengesi uye kuongorora imwe neimwe yeiyo nguva yose. Ndizvo zvingave zvakare zvinonzi kutamba aria kana uchigara pamusoro wako uye kutarisa mazai. (Kwete nedzimwe shanduko, kunyange zvakadaro inogona kuonekwa saizvozvo.)
Heino zvinhu zve 12 zvaunofanira kuyeuka apo urongwa hwemarudzi akawanda ehurumende maitiro:
Purogiramu yose system, uye mushure meizvozvo ichinosiyanisa uko gore rinopinda mairi:Wana mufananidzo wakajeka wechikamu chegore mumutungamiri wako wehutungamiri hwehutungamiri hwekuita kuti urege kuisa zvigadziro mune zvido zvekushandisa zvevatariri vebhizimisi nevamwe vatengi vakasiyana. Migwagwa yakasiyana-siyana yebhizimisi ichashandiswa zvakanakisisa neveveredzi vegore vakasiyana-siyana.
Shanda nevatengesi vanoita nokukurumidza uye vakasimbisa kune zvisingafanoonekwi. Ikoko pachava nemamiriro ezvinhu asingatarisirwi paunenge uchikanda pamwe akawanda makore ekufambisa. Nhengo dzako dzinofanirwa kuzivisa nguva dzose pamamiriro ezvinhu ekutungamira, kubudirira, uye zvitsva zvitsva.
Mechanize pasi-pasi kutarisa nekusimbisa mabasa. Zvitsanangudzo zviviri zvinokosha shure kwekugadzira cloud management ndezvokubhadhara mari uye zvinowedzera basa. Imwe nzira yekuita zvose zviri zviviri nekuderedza chiyero chekutarisa kwevanhu chinodiwa kuchengetedza zvigadziro zvenyu kugunun'una.
Izvo zvinogona kuitika zvakasiyana-siyana zvemakore akawanda ekutungamirira zvinowanikwa mumutsetse uyu unosanganisira zvikamu zvakawanda zvinofanira kusunganidzwa pamwe zvachose. Nhamba yakawanda yehutachiona hwepasi-yepamusoro inofanira kunge yakagadzirwa kuti ivandudze nzira yako. Mhedziso: Carl P. Lehrmann, 451 Research
tora pashure vatengi vako. Fungisisa zvakanyatsojeka kuti "vatengi" vekushanda kwenyu uye zvigadziriro zviri kuisa sei zvigadzidzo zvekushandisa. Idzo ndiyo inonyanya kujekesa iyo nzira ndeipi inonyanya kukurudzira vanokurudzira. Iwe unogonawo kuziva nezvehupi hupi hutsva hurumende vatengi vanowana hunovabatsira kuti vapedzise basa ravo zvakanyanya, kunyanya kunyanya uye nekuwedzera zvishoma nezvishoma. Izvi zvinokupa mukana wekuti uwane tariro yezvinhu zvese zvinoshandiswa nevatengi kuti vatsvake gare gare.
Zviviri zvakadzika pasi pamusoro pemari yekudzora. Iwe haugoni kudzora izvo zvausingaoni. Kutarisira vatengesi vakawanda vanovhiringidza nzira yekuraira hurumende itsva. Kuvhara zvipingamupinyi zvisingasviki zvekukurumidza kushandiswa kwehutungamiri hutsva hunobatsira, funga nzira yekutenga iyo inogona kugadziriswa sehurumende ivo pachavo. Kunyangwe zvakadaro, kwete kwenguva refu mushure mekutungamirirwa kwakananga usiku hwakatangira nguva, kuongorora kana hutungamiri hupi hupi hutsva hwakaruramiswa pasinei nemari uye kana pane zviri nani uye zvisingasviki zvakasarudzwa.
Kushandiswa kwehupenyu hupenyu hunoramba huchitungamirira gore kufamba. Sevha mapurazi angangodzokorora, zvisinei kuti haasi kuparara. Pamusana pezvikonzero zvakaratidzwa nekuchengeteka, kusanganisira, kuchengetedza, uye nhamba ipi zvayo yakasiyana-siyana, zvigadziriswa zvishoma zvinogara muimba kwemakore anotevera. Iwe pasina mubvunzo unoda kurega kuedza kusimudza nekuendesa kushandiswa kwemukati kune imwe imba kune kubatsirwa kwegore, kunyanya iyo inongova nemakore maviri kana matatu emakore uye nenzira iyi haisati yakabhadhara pachayo. Kana imwe nguva yakagadziriswa yakagadzirirwa kugadziriswa zvakare, hazvisi nyore kuisa bhizimisi rekuchengetedza kuenda kune gore-munzvimbo.
Shandisa simba re pre-emptable rakapotsa michina. Sezvo vachiramba vasina kuramba vachiwedzera kupfuura maawa 24, VM zvisati zvaitika ndezvokusarudza kwakanaka kwema clump kubata uye kuregerera kusungirirwa, sezvakaitwa ComputerWeekly's Matthew Cooter munyaya yaNovember 2016. VM dzisati dzisingakwanisi dzakawanda zvakafanana ne80 muzana zvisingabatsiri kudarika mienzaniso yeGoogle yemazuva ose, uye hutano hwavo huripo hwekubatsira huri kuronga nekugadzirisa zvavanoshandisa.
Embrace a coordinated server purazi yekugadzirisa zvakagadzirirwa kuti zvive zviitiko. Iyi ndiyo nzira yakanakisisa yekuvimbisa sevha yako, kuchengetedza, kuronga, kuchengetedza, maitiro uye mapoka ekukumbira ari kuita sendima yega yega kune zvinangwa zvakagoverwa, sekuratidzwa naJay Litkey, mutungamiri uye mutungamiri wesangano rinoshandiswa nefu Embotics, munaNovember 21, 2016, nyaya mu Virtual Strategy magazini. Chero sangano rakarongeka pamusoro pemiganhu yemasikirwo emasikirwo edzimhosva rinofanira kurwisana nekutama kwekuzvarwa uye marudzi akawanda emakore mamiriro ezvinhu.
Kusiyanisa zvibvumirano mubato rako ndivo yakakodzera zvakanyanya kune gore-kushandiswa kwekushandisa. Makomborero emitemo yakasimba, inoramba ichishanda seVMs, kushandisa shanduro-up engineering uye ndeyekunyanya kuoma zvakaoma kugadzira, kutumira uye kuchengeta. Nekusiyanisa, gore-nzvimbo dzekushanda zvinowanikwa zvakanyanya uye hutungamiri huripo, hunosanganisira kuunganidza mashizha nehutungamiri, zvichienderana nechigadzirwa chemazinga, uye chinyoreswa kuita robotize, kufamba, uye kuwedzera.
Fungisisa nezvekushanda muboka rako iyo inobatsira zvikuru kubva kune gore-inharaunda yekuita, uye inopinda kune iyo inoshandiswa zvakarongeka nesangano pane tsika yechimiro yepurazi. Kunobva: TechTarget
Gadzirai maitiro enyu kune mahofisi anotamba kune unhu hwavo. Mazita makuru ehurumende, somuenzaniso, VMware neAWS zvakabatana kuti zviwane zvido zvakasiyana zvevashandi vavo. Semuenzaniso, VMware's vSphere-based Enterprise Hybrid Cloud inotarisirwa kune zvigadzirwa zvemazuva, uye sangano reNative Hybrid Cloud rinoshandiswa pakuenzanisa, maitiro ekuchengetedza microservice. Zvinonyanya kukosha, AWS's Elastic Compute Cloud, Elastic Block Store, hurongwa hwekunyora EFS uye vPC padziviriro yezviratidziro mirara yemapurazi eimba, asi sangano rinowedzerawo kuwedzera hupfumi hwehuwandu hwakawanda, somuenzaniso, NoSQL databases, BI handling, Hadoop-like bunches, shoko mitsetse, kushidzira maziso ekufambisa, zvinyorwa zvemashizha uye web indexes.
Robotize urongwa hunopfurikidza pamusoro penyika mamiriro ezvinhu. Nzira huru yekuziva nayo nzira yekugadzirisa nekushandiswa kwemazuva akawanda ekufambisa kwekutarisira ndeyekuve nega yega yehutano hwekugadzirisa iyo yakabatana nekudaro kumamiriro ese ega. Nzira idzi dzinovhara zviyero zvakadai semaseva, basa rekushandisa, ruzivo rwekuchengetedza, ruzivo rwemabasa, ruzivo rwekuita / hutungamiri, ruzivo uye kuchengeteka. Ndizvo zvisingatauri kuedza kushandisa maitiro ekuvandudza uye kuchinja paunenge uine urongwa hwega hunoenderana nehutano hwakasiyana-siyana zvichienderana nekuti kuenderera mberi kunowedzera zvisina kukwana kubva kune zvakatipoteredza kune zvakatipoteredza.
Mutengesi akachengeteka anova relic yenguva dzakapfuura. Kana iwe uchitenderera zvachose pane rimwe rakazaruka gore rinobatsira, zvinogona kuva zvakaoma kutamisa maitiro chaiwo uye zvinhu zvakasiyana kune imwe hutungamiri. Pakati pezvikamu zvinofungidzirwa zvakafanana zvakashandurwa / kutora mitoro, zvido zvekutsinhanisa ruzivo uye hurongwa hwekusaziva. Nokutenderera pane pane tsika yako yekusanganiswa kwegore, masangano ose anogovana mazano nemagadziro, iwe unomuka uchibata nechinjuko panzvimbo yekuchinja kwekutarisa iwe.